တရုတျနိုငျငံက အိုမီခရှနျဗိုငျးရပျဈ ဖွဈပှားမှုမွငျ့တကျနသေညျ့ကွားမှ အိုလံပဈအားကစားပှဲကို ဘေးကငျးစှာ ကငျြးပနိုငျမညျဟု ယုံကွညျခကျြရှိ - Xinhua News Agency
တရုတျနိုငျငံ မွောကျပိုငျး ဟဲပပွေညျနယျ ကနျြးကြားခိုမွို့ရှိ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ပကေငျြး ဆောငျးရာသီအိုလံပဈ အားကစားပှဲအတှကျ ပွငျဆငျလကေ့ငျြ့မှုအတှငျး တရုတျနိုငျငံမှ စကိတျအားကစားအဖှဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားနသေညျကို ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ ၁၂ ရကျက တှရေ့စဉျ (ဆငျဟှာ)
တရုတျနိုငျငံသညျ COVID-19 အိုမီခရှနျ ဗီဇမြိုးကှဲဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသော စိနျချေါမှုမြားကို ကြျောလှားရနျနှငျ့ ကမ်ဘာကွီးအတှကျ ထိရောကျ၍ ဘေးကငျးပွီး ခမျးနားကွီးကယျြသော ဆောငျးရာသီအိုလံပဈ အားကစားပှဲမြား ကငျြးပရနျ ယုံကွညျခကျြရှိကွောငျး နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက ဇနျနဝါရီ ၃ ရကျ၌ ပွောကွားခဲ့သညျ။
၂၀၂၂ အိုလံပဈနှငျ့ မသနျစှမျး ဆောငျးရာသီအားကစားပှဲမြားအတှကျ ပကေငျြး အိုလံပဈအားကစားပှဲ ဖွဈမွောကျရေးကျောမတီ (BOCOG) သညျ သိပ်ပံပညာရပျဆိုငျရာ လလေ့ာဆနျးစဈမှုနှငျ့ ပွောငျးလဲနသေော အခွအေနအေပျေါ အခွခေံ၍ ကူးစကျရောဂါကာကှယျရေးနှငျ့ ထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျး အားကောငျးမှုရှိစရေနျ နိုငျငံတကာ အိုလံပဈကျောမတီ (IOC) နှငျ့ နိုငျငံတကာ မသနျစှမျးအိုလံပဈကျောမတီ (IPC) တို့နှငျ့ အနီးကပျ ဆကျသှယျဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး ဝမျးဝနျပငျးက သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောကွားခဲ့သညျ။
လကျရှိတှငျ IOC ၊IPC နှငျ့ BOCOG တို့သညျ ၂၀၂၂ ခုနှဈ ပကေငျြး အားကစားနညျးဗြူဟာစာအုပျမြား (Beijing 2022 Playbooks) ဒုတိယအကွိမျ တညျးဖွတျထုတျဝထေုတျဝခေဲ့သညျ။ Playbooks တှငျ ကောကျနုတျဖျောပွထားသော ကပျရောဂါ ထိနျးခြုပျရေး ဆောငျရှကျခကျြမြားသညျ နောကျဆုံးပျေါ သိပ်ပံနညျးကြ COVID-19 ရောဂါသုတသေနလုပျငနျးမြား၊ ပညာရှငျအမွငျမြားနှငျ့ အခွားသော နိုငျငံတကာ ယှဉျပွိုငျပှဲအတှအေ့ကွုံမြားအရ ဖျောထုတျထားခွငျး ဖွဈကွောငျး ဝမျးက ဆိုသညျ။
“ဒီလို တနျပွနျဆောငျရှကျခကျြတှကေ အားကစားပှဲမြားအတှငျး COVID-19 ရောဂါအန်တရာယျအား ထိရောကျစှာ လြှော့ခဖြို့၊ အားကစားသမားမြားနှငျ့ အိုလံပဈနှငျ့ မသနျစှမျးအိုလံပဈ၌ ပါဝငျသူမြားအတှကျ ဘေးကငျး၍ အဆငျပွခြေောမှမှေု့ရှိစဖေို့နှငျ့ ဒသေခံမြား၏ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ဘေးကငျးရေးကို ကာကှယျဖို့ ရညျရှယျထားပါတယျ။ Playbooks ကို လူတိုငျးတငျးတငျးကွပျကွပျ လိုကျနာနိုငျကွမယျလို့ ကြှနျတျောတို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောခဲ့သညျ။
တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ နအေိမျ၌ COVID-19 ရောဂါတိုကျဖကျြရာတှငျ မဟာဗြူဟာမွောကျ အောငျမွငျမှုရှိပွီးဖွဈကွောငျးနှငျ့ အခြိနျတိုတိုနှငျ့ ထိရောကျမှုရှိသော ကူးစကျရောဂါ ကာကှယျရေးနှငျ့ ထိနျးခြုပျရေးစနဈကို အကောငျအထညျဖျောထားလကျြရှိကွောငျး ဝမျးက ဖွညျ့စှကျပွောကွားခဲ့သညျ။ (Xinhua)
BEIJING, Jan.4(Xinhua) — China has the confidence to overcome the challenges posed by the Omicron variant of COVID-19 and deliverastreamlined, safe and splendid Winter Olympic Games for the world,aForeign Ministry spokesperson said here Tuesday.
Wang added that China has securedastrategic victory in the fight against COVID-19 at home and put in place an efficient and effective epidemic prevention and control system. ■
Photo : Athletes of Chinese national cross-country skiing team compete during an intra-team simulation competition preparing for the Beijing 2022 Olympic Winter Games in Zhangjiakou City, north China’s Hebei Province, on Dec. 12, 2021. (Xinhua/Hu Huhu)
တရုတ်နိုင်ငံက အိုမီခရွန်ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေသည့်ကြားမှ အိုလံပစ်အားကစားပွဲကို ဘေးကင်းစွာ ကျင်းပနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ချက်ရှိ
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် COVID-19 အိုမီခရွန် ဗီဇမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားရန်နှင့် ကမ္ဘာကြီးအတွက် ထိရောက်၍ ဘေးကင်းပြီး ခမ်းနားကြီးကျယ်သော ဆောင်းရာသီအိုလံပစ် အားကစားပွဲများ ကျင်းပရန် ယုံကြည်ချက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၂ အိုလံပစ်နှင့် မသန်စွမ်း ဆောင်းရာသီအားကစားပွဲများအတွက် ပေကျင်း အိုလံပစ်အားကစားပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ (BOCOG) သည် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်မှုနှင့် ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေအပေါ် အခြေခံ၍ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်း အားကောင်းမှုရှိစေရန် နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်ကော်မတီ (IOC) နှင့် နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းအိုလံပစ်ကော်မတီ (IPC) တို့နှင့် အနီးကပ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဝမ်းဝန်ပင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် IOC ၊IPC နှင့် BOCOG တို့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပေကျင်း အားကစားနည်းဗျူဟာစာအုပ်များ (Beijing 2022 Playbooks) ဒုတိယအကြိမ် တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Playbooks တွင် ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားသော ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များသည် နောက်ဆုံးပေါ် သိပ္ပံနည်းကျ COVID-19 ရောဂါသုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရှင်အမြင်များနှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံများအရ ဖော်ထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းက ဆိုသည်။
“ဒီလို တန်ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေက အားကစားပွဲများအတွင်း COVID-19 ရောဂါအန္တရာယ်အား ထိရောက်စွာ လျှော့ချဖို့၊ အားကစားသမားများနှင့် အိုလံပစ်နှင့် မသန်စွမ်းအိုလံပစ်၌ ပါဝင်သူများအတွက် ဘေးကင်း၍ အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိစေဖို့နှင့် ဒေသခံများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးကို ကာကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ Playbooks ကို လူတိုင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ် လိုက်နာနိုင်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နေအိမ်၌ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရာတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် အောင်မြင်မှုရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် အချိန်တိုတိုနှင့် ထိရောက်မှုရှိသော ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ထားလျက်ရှိကြောင်း ဝမ်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
ပုံစာ – တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟဲပေပြည်နယ် ကျန်းကျားခိုမြို့ရှိ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ် အားကစားပွဲအတွက် ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှုအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ စကိတ်အားကစားအဖွဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
#China, #Olympic, #Omicron, #COVID_19, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #တရုတ်, #အိုလံပစ်, #အိုမီခရွန်, #ဆင်ဟွာ, #မြန်မာ #ဆင်ဟွာမြန်မာ